Xaqa uu cunugga megangelyada doonka ah u leeyahay in qoyskiisa la keeno Finland - Asylum in Finland
Kaddib marka uu cunuggu go’aan ogolaansho ah ka helo codsigiisa megangelyada, xubnaha qoyskiisa, oo ah mas’uulkiisa iyo walaalihiisa aan qaangaarin waxey codsan karaan ogolaanshaha degitaanka Finland.
Xubnaha qoysku waxey codsigooda ogolaanshaha degitaanka qaab elekterikaal uga codsan karaan cinwaanka: enterfinland.fi. Waxey sidoo kale codsigooda ogolaanshaha degitaanka ka sameysan karaan wakiilka dibadda ee Finland.
Dhammaan xubnaha qoyska ee codsanaya ogolaanshaha degitaanka waa in ay tagaan wakiilka dibadda ee Finland ama goobta kale ee arrimo fulinta si ay isu-caddeeyaan una dhiibaan faro haddii sidoo kale codsiga loo sameeyaan qaab elekterikaal ah. Haddii loo baahdo in la wareysto xubnaha qoyska waxaa loogu yeerayaa wakiilka.
Wakiilka dibadda ee Finland waxaa laga yaabaa in uu ku yaalo dal kale oo aan aheyn kan ay deggan yihiin xubnaha qoysku, markaas haddii loo baahdo waa in ay u soo qaataan fiisada dalka laga hadlayo.
Residence permits in English:
codsiga megangelyda qoys nidaambka Dublin